Iyo App Ine Shiri: Europe Kuwedzera kweWing Beat Inowanikwa Digitally - Spielpunkt - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Digital vhezheni yeanalog board mitambo haisisiri shomero. Iyo Kennerspiel des Jahres 2019 zvakare ine yayo yedhijitari kuita. Kuwedzera kwekutanga kwasvika pakupedzisira.
Wing Flap ndeimwe yebhodhi mutambo webudiriro nyaya dzemakore achangopfuura. Iyo yakapfava mitemo yakasanganiswa nekudzika kwemutambo uye yakatanhamara artwork inochengeta mutambo uri panhamba 24 yemitambo yese paBoardGameGeek. Iwo mibairo yakawanda (kusanganisira Kennerspiel des Jahres, Deutscher Spiele Preis) vanozvitaurirawo kuti mutambo unotambirwa sei. Sezvo makadhi zana nemakumi manomwe ari mumutambo wekutanga wega, pamwe nemabhodhi evatambi uye zvimwe zvinhu, hazvigone kutorwa pese pese newe, mutambo unowanikwawo seapp. Ikozvino, nekuwedzera kweEurope, yekutanga yeaviri ebhodhi mutambo wekuwedzera wakatoburitswa urikuonekwawo mudhijitari fomati.
Sezviri mushanduro yemuviri, kuwedzera kweEurope kunounza huwandu hwemakadhi eshiri matsva makumi masere nerimwe kubva kuEurope. Mukuwedzera, pane kukwanisa "Pakupera kwekutenderera". Shiri dzose dziri mumutambo dzinoperekedzwa nekurira kwadzo. Uye zvakare, kune matsva emashure eiyo tableaus mushanduro yeapp, inofemerwa neEuropean landscapes.
Sezvaunozviziva kubva kubhodhi mutambo, iyo Automa inosanganisirwa zvakare muapp yekuwedzera kweEurope.
Iyo app inokutendera iwe kukwikwidza pamapuratifomu nevatambi vanobva kumativi ese enyika. Kune avo vanoda kutonyanya kukwikwidza, kune vhiki nevhiki makwikwi mukati meapp. Mune izvi, ivo vanokwikwidza vachipokana neAutoma pasi pemitemo yakanangana.
Iyo Monster Couch app inowanikwa yeApple, Android, Xbox, Nintendo Chinja uye Steam, pakati pevamwe.
Kare Zvinhu zvese zvakanaka zvinouya muzvina: chitima mushure mekumhanya kwechitima muSan Francisco
Inotevera Nhau mumutambo wefoge: Radlands inotanga kuunganidza mari
E-mitambo: SK Gaming uye Epos inowedzera kudyidzana
Ongororo yeStar Wars - Kusimuka kweSkywalker: Kupera Kwenguva sekutanga kweNyowani.
Kusvika makumi matanhatu muzana zvakachipa: Iyo Nintendo eShop yakakosha inopa
Mitambo 5 yepamusoro yebhodhi yevakuru - Medieval & Castles chikamu